ZCTU Inotsigira Kurudziro yeITUC Yekusashungurudza Vanotengesera Mumigwagwa
Sangano revashandi reZCTU rinoti rinotsigira ITUC panyaya yekudzingwa kwevanhu mumigwagwa
Rimwe sangano rinomirira vashandi pasi rose, reInternational Trade Union Confederation, (ITUC) rinoti rinoshoropodza zvikuru danho riri kutorwa nemakanzuru emunyika rekubvisa vanotengesera mumigwagwa, zvichitevera kurudziro yemutungamiri wenyika VaRobert Mugabe.
Nekuda kwechiitiko ichi, sangano iri svondo rapera rakanyorera VaMugabe tsamba richiratidza kunyunyuta kwaro uye kuvayeuchidza kuti kuita uku kutyora bumbiro remitemo yenyika pamwe nebumbiro repasi rose.
Mutsamba yavo kuna VaMugabe, munyori mukuru weITUC, Amai Sharan Burrow, vakati sangano ravo rino kurudzira kuti hurumende imise kudzingwa kwevanhu mumigwagwa, uye kuti itore matanho ose anokodzera ekuona kuti vanhu vose ivava vawaniswa pekushandira.
Mutewedzeri wechipiri wemunyori weZimbabwe Congress of Trade Union, ZCTU, VaThomas Masvingwe, vanoti sangano ravo rinotsigira chose kurudziro yeITUC iyi sezvo vashandi vazhinji vakarasikirwa nemabasa vave kurarama nekutengesa mumigwagwa.
VaMasvingwe vanoti kunyange hazvo vasingatarisire kuti VaMugabe vangateerera zviri kukurudzirwa neITUC, danho irori rinogona kuitakuti VaMugabe vasazoremekedzwa nevamwe pasi rose.
Hurukuro naVaThomas Masvingwe